डा. विकास अधिकारी काठमाडौं, १८ जेठ
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्‍याे । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सँग विश्व जुधिरहेको परिस्थितिमा बजेट आएको छ । बजेटमा शिक्षाक्षेत्रका पनि केही कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
सुसंस्कृत समाज निर्माण र देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने आधार शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षामा बजेट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने भन्ने आवाज वर्षेनि उठ्छ । तर शिक्षामा कम बजेट पर्ने गरेको छ । यद्यपि, वर्षेनि केही प्रतिशत भने बढ्ने गरेको छ । त्यो पर्याप्त बजेट होइन । यसले हामीले बनाउन खोजेको देश र शिक्षाको उन्नयन हुन सक्दैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नै सिद्धान्त र चुनावी बाचाविपरीतका शिक्षाका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय कमजोर र निजी विद्यालय मजबुत रूपमा देखिनु र बजेटले पनि त्यहीअनुरुप आँकलन गर्नु आफैँमा नौलो भने होइन ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा हामीले सधैँ राष्ट्रियकरण भन्ने शब्द सुन्दै आएका छाैँ । विशेषगरी स्वास्थ्यमा अस्पताल र शिक्षामा निजी विद्यालयहरू । तर, जसरी बजेटमा सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको सन्देश देखिएको छ, यसले प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविकै हो । यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आएको हो कि अर्थका सल्लाहकारहरूको माध्यमबाट आएको हो ? आगामी दिनमा खुल्दै जाला ।
हरेक निजी स्कुलले सामुदायिक स्कुलको उत्तरदायित्व वहन गर्ने भन्नेमा गर्ने कि, यसका लागि सरकारको तयारी के छ ? सरकारले साच्चै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गरेको हो भने मापदण्ड र निर्देशिका नयाँ शैक्षिकसत्रबाट लागू हुनेगरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्डले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट सरकारको निर्णय दूरदर्शी होला र आमनागरिकलाई शिक्षा व्यवसाय मात्र हाेइन रहेछ भन्ने आभाष गराउन सकिएला भन्ने नै अहिलेको प्रमुख मुद्दा छ ।
सरकारी विद्यालय स्तरारोन्नति गर्दै निजीक्षेत्रलाई नाफामुखीबाट समाजमुखी बनाउनुबाहेक अरु विकल्प छैन । त्यसैले हरेक स्थानीय निकायमा एउटा शिक्षा बैंक स्थापना गरी शैक्षिक क्षेत्रको सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था सरकारीकरण गर्ने र निजीक्षेत्रको नाफाबाट केही अंश सामुदायिक विद्यालयको सामुदायिक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्दा सामाजिक परिवर्तनको नयाँ बाटो सावित हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका सबै दोष निजी विद्यालयमा खोज्नु मूर्खता पनि हुन जान्छ । त्यसैले निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्दा वा विद्यालयले तलब दिँदा बैंकमार्फत लिनेदिने गरौँ । बैंकले शुल्क लिनेदिनेको तलब सबैको रेकर्ड राख्छ ।
शिक्षामा गरेको लगानीमार्फतको सबै खर्च काटेर १५–२० प्रतिशत मात्र नाफा लगानीकर्ताले लिन पाउने कानुन बनाएर लागू गर्न सकिन्छ । यसो गर्ने हो भने अहिलेको व्यवस्थाभन्दा निकै प्रगतिशील हुनेछ ।
पब्लिक, प्राइभेट र पार्टनरसिपको मोडेलभन्दा यो केही फरक पनि हुनेछ । निजीक्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै नाफामुखी व्यापारबाट उठेको पैसाले ढल्न लागेको सामुदायिक क्षेत्रलाई टेको लगाउन सकिन्छ ।
सरकारी विद्यालयहरू अपग्रेड गर्न अति आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको विकास गर्ने हो भने विद्यालयका पार्टीगत सगसंगठन खारेज गर्नुको विकल्प छैन । व्यवस्थापन समितिलाई सकारात्मक तरिकाले परिचालन गरिनुपर्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले संसदीय व्यवस्था पनि स्वीकारेको छ । एक हिसाबले ऊ पुँजीवादी व्यवस्थामा रमाएको पनि छ । यो यथार्थबाट भाग्न सकिने अवस्था छ र ? कि यो यथार्थ स्वीकारौँ, होइन भने साम्यवाद घोषणा गर्न, जनवादी शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गर्न वकालत गरौँ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७, १५:१२:००
इक्यानले गभर्नरलाई बुझायो ७ बुँदे सुझाव
विकासको मोडेल परिवर्तन गर्ने समय